गण्डकी सरकार छिनोफानोः होला त कृष्णचन्द्र नेपालीको भाग्योदय? - News Book Online
गण्डकी सरकार छिनोफानोः होला त कृष्णचन्द्र नेपालीको भाग्योदय?
जेष्ठ २९, २०७८ ०९:३३ प्रकाशित
पोखरा । गण्डकी सरकारको छिनोफानो आज हुँदै छ । विपक्षी गठबन्धनका कृष्णचन्द्र नेपाली लगभग मुख्यमन्त्री बन्ने पक्कापक्की जस्तै छ । यसअघि पनि गण्डकी सत्ता परिवर्तनको खेलमा नयाँ ट्विस्ट आउदा डिलमै पुगेको पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार जोगियो । अघोषित मुख्यमन्त्री भई सकेका नेपालीलाई पछि पार्दै पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नै गोल हाने ।
तर, संसदमा विश्वासको मत लिन नसक्दा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार ढल्न पुग्यो । बल फेरि, नेपालीकै हातमा आई पुगेको छ । हिजो प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले नयाँ सरकार गठनको लागि सांसदहरुलाई आह्वान गरे लगत्तै सशरीर दाबी पेश गर्न पुगेका सांसदहरुले हस्ताक्षरसहितको पत्र प्रदेश प्रमुख कहाँ बुझाई सकेका छन् । प्रदेश प्रमुख पौडेलले २४ घण्टा भित्रमा नयाँ सरकार गठनको लागि आह्वान गरेकी थिइन् । विपक्षी गठबन्धनको प्रस्ताव बुझेर भोलि बोलाउने भनेर फर्काएकी पौडेलले नयाँ सरकार गठनको लागि आज ३ बजे सम्मको समय छुट्याएकी छन् ।
संसदको सबैभन्दा ठूलो दल भएर पनि सरकारको नेतृत्व गर्न एमालले पाएन । काँग्रेस, माओवादी, जसपा, राजमो र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेसहितको गठबन्धनले अन्तत् एमाले सरकार ढल्न पुग्यो । अबको मुख्यमन्त्री बन्न लागेका काँग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीको इतिहास यस्तो छः
नेपाली काँग्रेसका पूर्व केन्द्रीय सदस्य कृष्णचन्द्र नेपाली गण्डकी प्रदेशसभामा नेपाली काँग्रेसको संसदीय दलका नेता हुन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको २०७४ सालमा भएको ऐतिहासिक पहिलो प्रदेशसभा निर्वाचनमा उनी गण्डकी प्रदेश नवलपरासी पूर्व १-९१० बाट निर्वाचित भएका थिए ।प्रजातन्त्रका सेनानी एवं नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य स्वर्गिय गोवद्र्धन शर्माका उनी माहिला छोरा हुन् । ग्रेसको १२ औं महाधिवेशनमा लुम्बिनी अञ्चलबाट उनी केन्द्रीय समितिमा निर्वाचित भएका थिए ।
त्यसअघि ४ पटक ९२०४८ देखि २०६७ सम्म नेपाली काँग्रेस नवलपरासीको सभापतिमा निर्वाचित भएका थिए । सभापति बन्नु अघि उनी जिल्ला कार्यसमितिको सदस्य मात्र थिए । चार दशकदेखि सक्रिय राजनीतिमा क्रियाशील नेपालीले प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापनका लागि भएको आन्दोलनको क्रममा पटक–पटक गरी ३ वर्षभन्दा बढी जेलजीवन बिताइसकेका छन् ।
२०२२ देखि २०२८ सालसम्म उनले पिता स्वर्गियगोवद्र्धन शर्माका साथ भारतमा निर्वासित जीवन बिताएका थिए । राजनीतिक जीवन सँगसँगै उनले लामो समय काभ्रे फलानटे, तनहुँ दमौली र तनहुँ थर्पुका हाइस्कुलमा राजनीतिशास्त्र, भूगोल, इतिहास पढाउथे । २०३६ सालको जनमतसंग्रहमा बहुदलको प्रचारमा सक्रिय भई नेपाली काँग्रेसलाई विजयी गराएको आरोपमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले उनलाई जुम्ला सरुवा गर्ने निर्णय गर्‍यो। साथसाथै २०३६ साल ताका पञ्चायती दमन र शारीरिक यातनापछि बाध्य भएर उनले शिक्षण पेसा परित्याग गरे ।
नेपाल बार एशोसिएसनका सदस्य समेत रहेका उनी प्रमर अधिवक्ताको रूपमा पनि परिचय बनाएका छन् । जनपक्षीय कानुनी सेवामा समर्पित उनको सिङ्गो प्रयासबाट धेरै प्रजातन्त्रवादी राजबन्दीहरू तनहुँ र नवलपरासीबाट छुटेका थिए । राजनीतिक कारणले आफैँ शारीरिक यातनाबाट गुज्रिएका नेपाली एमनेस्टी इन्टरनेसनल, नवलपरासीको संस्थापक अध्यक्ष पनि हुन् । २००५ साल जेठ ५ मा तनहुँको राम्चे ९हाल ब्यास–११० मा बाबु गोवद्र्धन शर्मा र आमा द्रोपदा शर्माको कोखबाट उनको जन्म भएको हो । उनका श्रीमती लता पोखरेल, २ छोरा र २ छोरी तथा नातिनातिना छन् । २०२२ देखि २०२८ सम्म पिता गोवद्र्धन शर्मासँग भारतमा निर्वासित जीवन २०२९ देखि २०३६ सम्म काभ्रे फलानटे, तनहुँ दमौली र तनहुँ थर्पुका हाइस्कुलहरूमा अध्यापन २०३५ सालमा विद्यार्थी आन्दोलनमा सक्रिय नेतृत्व, २०३६ सालको जनमतसंग्रहमा सक्रिय नेतृत्व ९तनहुँमा नेपाली काँग्रेस विजयी, २०३७ निर्वान वहिष्कार जेल चलान
२०४६: प्रथम जनआन्दोलन जेल चलान, २०४८: सत्याग्रह जेल चलान, २०४८: सालको निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेस तर्फबाट नवलपरासी–४ मा उम्मेदवार, २०४८ देखि २०६७ सम्म सभापति नेपाली काँग्रेस नवलपरासी, २०६२र६३ को दोस्रो जनआन्दोलन जेल चलान, २०६७: नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय समितिमा निर्वाचित, २०७०: सालको संविधानसभा निर्वाचनमा नवलपरासी क्षेत्र ३ मा प्रत्यक्षतर्फका लागि नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार (झिनो मतान्तरले पराजित, ०७४: संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको ऐतिहासिक पहिलो प्रदेशसभा निर्वाचनमा गण्डकी प्रदेश नवलपरासी पूर्व १ बाट निर्वाचित, २०७५: गण्डकी प्रदेश नेपाली काँग्रेसको संसदीय दलका नेतामा सर्वसम्मतले निर्वाचित ।
एमालेको २७ सांसद हुँदा विपक्षीको ३१ सांसद छन् । यो सरकार गठन गर्नको लागि स्पष्ट बहुमत हो । आज दिनभर राजनीतिक समीकरण नबिग्रिए उनी मुख्यमन्त्री हुने निश्चित छ । हेरौं आज उनको गण्डकीको मुख्यमन्त्री बन्ने भाग्य छ कि छैन ?